Horudhac: Manchester City vs Brighton & Hove Albion… (Sky Blue oo caawa indhaha ku haysa inay sii dheereysato guulaheeda) – Gool FM
DEG DEG: Kooxda Manchester City oo maanta dhammaystiraysa saxiixa Jack Grealish
Xiddig ka tirsan Kooxda Manchester City oo doonaya inuu dib ugu laabto dalka Spain
Mustaqbalka Kylian Mbappe ee Kooxda PSG oo weli shaki ku jira… (Maxaa soo kordhay haatan?)
Chelsea oo markaan dalab aan la diidi karin u diyaarisay Romelu Lukaku & Weeraryahanka laftiisa doonaya inuu dib ugu soo laabto Stamford Bridge
Xulalka Brazil iyo Spain oo isku wajihi doona Final-ka kubadda cagta ee Olimbikada Adduunka… (Goormee ayaa la ciyaari doonaa?)
RASMI: Fabinho oo heshiiska u kordhiyey Kooxdiisa Liverpool… (Imise sano ayuu saxiixay?)
Kooxda PSG oo markaan indhaha ku haysa Kalidou Koulibaly… (Miyey ka garab ciyaarsiin doontaa Sergio Ramos?)
Horudhac: Manchester City vs Brighton & Hove Albion… (Sky Blue oo caawa indhaha ku haysa inay sii dheereysato guulaheeda)
(Manchester) 13 Jan 2021. Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa dooneysa inay sii dheereysato guulaheeda tartammada oo dhan ilaa 7 kulan marka ay caawa garoonkooda Etihad ku soo dhaweynayaan Brighton & Hove Albion kulanka qeyb ka ah horyaalka Premier League.
Labada kooxood ayaa u soo gudbay todobaadkan wareegga afaraad ee FA Cup, iyadoo kooxda Pep Guardiola ay si xarago leh uga soo gudubtay Birmingham City, halka Brighton ay rigoorayaal ku reebtay kooxda heerka labaad ee Newport County.
Saacadda ay ciyaarta billaabaneyso: 09:00 Habeennimo xilliga geeska Afrika
Garsooraha: Darren England (England)
Weeraryahanka kooxda Manchester City ee Sergio Aguero ayaan la heli karin kulankan, maadaama uu karaantiil ku jiro kaddib markii uu xiriir la sameeyey qof qaba Korona Fayras.
Ederson ayaa ciyaari kara kulankiisii ugu horreeyay tan iyo markii uu ku dhacay qaabuqa, laakiin Aymeric Laporte iyo Nathan Ake ayaa dhaawacan.
Brighton waxaa dhaawac uga maqan saddexda ciyaaryahan ee Danny Welbeck, Aaron Connolly iyo Tariq Lamptey, halka Adam Lallana uusan fiicnayn iyadoo Yves Bissouma uu ganaax ku maqnaan doono.
Steven Alzate ayaa ka soo laaban kara xanuun uu la maqnaa.
Alireza Jahanbakhsh ayuu dhaawac fudud soo gaaray, waana la qiimeyn doonaa xaaladdiisa.
>- Manchester City ayaa guuleysatay dhammaan lixdii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka Premier League oo ay kooxdaan la ciyaartay, waxa ay dhaliyeen 20 gool, iyadoo laga dhaliyey kaliya labo gool.
>- Kooxda Brighton ayaa weligeed guuleysan kulan horyaalka ah oo ay booqatay Man City, waxaana barbaro la galeen 2 kulan, halka ay guuldarro la soo kulmeen 8 goor.
>- Man City ayaan laga badinin todobadii kulan ee ugu sarreysay horyaalka, iyagoo badiyay shan ka mid ah kulamadaas – oo ay ku jiraan mid kasta oo ka mid ah saddexdii kulan ee ugu dambeeyay.
>- Iyagu ma aysan guuleysan afar kulan oo isku xigta Premier League xilli ciyaareedkii hore illaa iyo markii ay ka tanaasuleen horyaalka, iyagoo xilli ciyaareedka ku soo afjaray shan guul oo isku xigta.
>- Kaliya afar kooxood oo Premier League ah ayaa dhaliyay goolal yar qeybta labaad marka loo eego Man City xilli ciyaareedkan, iyadoo kooxda Pep Guardiola uu hoggaamiyo ay dhalisay 18 ka mid ah 24 gool oo ay heshay qeybta hore.
>- Man City ayaa laga dhaliyey todobo gool tan iyo bilowgii bishii October, taas oo afar gool ka yar kooxaha kale ee Premier League.
>- Ilkay Gundogan ayaa leh saddex gool afartii kulan ee ugu danbeysay ee Manchester City, kaddib 12 bilood iyo 21 kulan oo uusan lahayn wax goolal ah.
>- Kani wuxuu noqon doonaa kulankii 300-aad Brighton ee horyaalka heerka koowaad.
>- Guul ma aysan gaarin Brighton siddeedii kulan ee ugu dambeeyay oo ay ciyaartay horyaalka heerka koowaad.
>- Brighton ayaa guul la’aan ah dhammaan 13-keedii kulan ee horyaalka Premier League ay ciyaartay bisha Janaayo 6 barbaro ayay gashay 7 kulanna waa laga badiyey, sidoo kale ma adkaanin dhammaan sagaalkii ciyaarood oo ay dheeshay maalin Arbaco ah, waxaana ay la kulantay 5 barbaro iyo 4 guuldarro.
>- Waxa ay iska dhaliyeen sagaal gool (own goals) tan iyo markii ay u soo dallaceen horyaalka Premier League sanadkii 2017-kii, waana in ka badan kooxaha kale tan iyo waqtigaas.
Kooxda Manchester United oo la wareegtay hoggaanka horyaalka Premier League, kaddib markii ay garoonka Turf Moor ku soo garaacday Burnley
Kooxda Juventus oo xaqiijisay haddii Weston McKennie uu diyaar u yahay inuu wajaho Inter Milan